NLD Party’s Charity Music Concert | My Burmese Blog
NLD Party’s Charity Music Concert	On January 1, 2012	by Htoo Tay Zar	With	6 Comments	- Music, Myanmar news, Photo News	၃၀ ရက်နေ့မှာ National League for Democracy Party က ပညာရေးရန်ပုံငွေအတွက်လုပ်တဲ့ show ပွဲကို ရောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပွဲကို MCC မှာ ညနေ ၃ နာရီကစလုပ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အပြင်ဘက် ကွင်းပြင်မှာလုပ်ပြီး စျေးဆိုင်တန်းတွေနဲ့ တော်တော်စည်ပါတယ်။ ဖွင့်ပွဲ အခန်းအနားကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင်တက်ရောက် အမှာစကားပြောပြီး အဆိုတော်များနဲ့ အတူဖွင့်လှစ်ပါတယ်။
Show ပွဲလို လူစည်တဲ့နေရာ သိပ်သွားလေ့မရှိတဲ့ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ ဒီပွဲက ထူးထူးခြားခြားပါပဲ ဘာလို့လဲဆိုတော့ stage စင်အကြီးကြီးဆောက်ထားတာတွေ့ရတာရယ်။ နောက် backdrop design ကိုလဲ ကြိုက်တာလဲပါတယ် စင်တစ်ခုလုံး အနီရောင်နောက်ခံနဲ့ ဘာစာသားမှ မပါပဲ အန်တီစုပုံ graphic art နဲ့ အရှင်းလုပ်ထားတာကို အရမ်းကြိုက်တယ်။ ဘေးဘက် တစ်ဖက်စီမှာတော့ အန်တီပုံအကြီးကြီး ၂ ခုထောင်ထားတယ်နောက် LED Screen အကြီးကြီးတစ်ခုထားပေးထားတာ ရှိတယ် နောက် ကွင်းအလယ်နဲ့ အနောက်ဖက်တွေမှာ အန်တီပုံ နောက် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဆိုတဲ့ ဘုတ်အကြီးကြီးတွေနဲ့ ကြည့်ရတာ Woodstock လို ဂီတပွဲမျိုးနဲ့ အတော်တူပါတယ်။ ကြားရသလောက် ဒီပွဲမှာ ဖျော်ဖြေဖို့ U2 အဖွဲ့နဲ့ Black Eye Peas အဖွဲ့က ကမ်းလှမ်းသေးတယ်လို့ ဆိုပါတယ် အကြောင်းကြောင်းကြောင့် သူတို့ ပါခွင့်မရလိုက်ဖူးထင်ပါတယ်။ Myanmar Democracy Leader Aung San Suu Kyi’s NLD Party Charity Music Concert 2011 @ MCC, Yangon, Myanmar. More than 60 famous singers perform to raise the fund for assisting education in Myanmar.
နောက် အဆိုတော်တွေ၊ bands တွေလဲ အများကြီး သိရသလောက် အဆိုတော် ၆၀ နီးပါးလောက်က သီဆိုပေးပါတယ်။ တကယ့်ကို woodstock လိုပဲ ဒါပေမယ့် စည်းကမ်းရှိပြီး သေသပ်တဲ့ပွဲပါပဲ အထဲမှာ မူးရူးသောင်းကျန်းတဲ့သူ မပါဘူး။ အန်တီစု ကတော့ ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ အလယ်နားမှာထိုင်ပါတယ် ရှေ့ဆုံးခုံတန်းမှာ မထိုင်ပါဘူး။ ဒီပွဲမှာ စင်ပေါ်မှာ အန်တီပုံ ရိုက်နှိပ်ထားတဲ့ t-shirt ၂ ထည်ရှိပြီး အဲဒီပေါ်မှာ အဆိုတော်တွေ၊ ဂီတပညာရှင်တွေက လက်မှတ်ရေးထိုးပေးကြပါတယ်။ အဲဒီ ၂ ထည်မှာ ၁ ထည်ကို အန်တီကို အမှတ်တရပေးမှာ ဖြစ်ပြီး ၁ ထည်ကိုတော့ ပညာရေးရန်ပုံငွေအတွက် လေလံပစ်တာမှာ ကျွန်တော် ည ၁၀ နာရီပြန်လာတဲ့ အထိ စျေးက သိန်း ၇၀ ရောက်နေပါပြီ။ နောက်ဆုံးမှာတော့ ၁၂၅ သိန်းနဲ့ အမျိုးသမီး စီးပွားရေးသမား တစ်ယောက် ဝယ်ယူအားပေးသွားတယ်လို့ သိရတယ်။
Aung Aung (Brother of Htoo Eain Thin) performs Yarzawin Myar Yae’ Thato Thamee at National League for Democracy Party’s Charity Concert show in Yangon, Myanmar on 30 December 2011.
ပွဲက ဘယ်အချိန်ပြီးလဲတော့ မသိပါဘူး ကျွန်တော်ကတော့ ၁၀ နာရီလောက်မှာ ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်အထိ အဆိုတော် အများကြီးမဆိုရသေးဘူးဆိုတော့ ညနက်မှပြီးတယ်ထင်ပါတယ်။ အဆိုတော်အစုံ တီးဝိုင်းအစုံနဲ့မို လာကြည့်တဲ့ ပရိတ်သတ်တွေလဲ လက်မှတ်ဝယ်ရတာ တန်တဲ့ပွဲပါပဲ။ နောက်လက်မှတ်ဖိုးတွေကလဲ အလကားမဖြစ်ပဲ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူတွေအတွက် ပညာရေးအထောက်အပံ့ဖြစ်တာမို့ အလှူလုပ်ပြီးသားလဲ ဖြစ်တဲ့ပွဲပါ။ ပွဲဟာ Standard ရှိပြီး ကျွန်တော် ကြုံဖူးတဲ့အထဲမှာတော့ အကြီးကြယ်ဆုံး ဂီတပွဲတော်ပါပဲ။ ၂၀၁၂ ထဲမှာလဲ ဒီလိုမျိုးပွဲနောက်ထပ် လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ အတိုင်းအထက်အလွန် ကောင်းမှာပါပဲ။ မကြည့်လိုက်ရတဲ့သူတွေအတွက် နိုင်သလောက် ဗီဒီယိုလေးရိုက်ထားပြီး showreel ပုံစံလေး လုပ်ပြထားပါတယ်.. ကျွန်တော်ရှိနေတုန်းမှာ ဇော်ဝင်းထွဋ်၊ အဲလက်စ်၊ လင်းလင်း စတဲ့သူတွေ မဆိုသေးတာမို့ အကုန်မပါခဲ့ပါဘူး။ နောက် ထူးအိမ်သင် ရဲ့ ညီ အောင်အောင် ဆိုထားတဲ့ ရာဇဝင်များရဲ့ သတို့သမီး သီချင်းကိုတော့ အစအဆုံး ရို်က်ထားလိုက်တယ်။ အဲဒီကောင်ကတော့ iPhone ကင်မရာနဲ့ ရိုက်ထားတာမို့ အသံတွေဘာတွေတော့ မကောင်းပါဘူး။
ကွန်နက်ရှင် မကောင်းလို့ ဘာမှတင်မရတာနဲ့ ၂၀၁၂ ထဲတောင်ရောက်သွားပါတယ်.. အားလုံးပဲ Happy New Year ပါ…. Music, Myanmar news, Photo News	6 Comments	Aung Myin
Happy New Year အစ်ကို၊
Like or Dislike: 1 0	Soe Wai
ဝိုး… ပုံတွေအရမ်းမိုက်တယ်ဗျာ။ ကိုထူးတေဇာကြီး… အားပေးနေတယ်။ ဆက်ချဗျာ။
ဂီတသမားတွေအားလုံးထဲ ကိုတိုးတိုးကြီး ဂစ်တာတီးနေတဲ့စတိုင်လ် အရမ်းလန်းတယ်။
ပုံတွေ အားလုံး ကြိုက်သဗျ။
Like or Dislike: 1 0	ko sai
ၾကည့္လာသမွ် ျမန္မာ၀က္ဆိုက္မွာ ဓါတ္ပံုရိုက္ခ်က္ကေတာ့ ရွယ္တကာ့ ရွယ္ပဲဗ်ာ…ႀကိဳက္သြားၿပီဗ်ာ…
Like or Dislike:00	mgthant
Thankalot Like or Dislike:00	Myat Htut
Nice and Good Go On bro……… Like or Dislike:00	lin let htoo
arr lone mite tal…